City of Vantaa - 20210805_lukiot_ja_varia_lahiopetuksessa_somali
Dugsiyada sare iyo Varia ee Vantaa waxaa ay bilaabayaan waxbarashada lagu qaato goobta waxbarashada ee xilli-dugsiyeedka dayrta
Kooxda iskudduwidda arrimaha korona ee caasimadda iyo hareeraheeda waxaa ay shir isugu yimaadeen Talaada 3.8.2021. Shirkaas waxaa lagu go’aamiyay, in in waxbarashada xilli-dugsiyeedka dayrta ee heerka labaad ee caasimadda iyo hareeraheeda lagu bilaabo qaabka ah waxbaridda ay ardaydu ku qaataan goobta waxbarashada. Go’aankaas wuxuu khuseeyaa machadka xirfadaha ee Varia iyo dugsiyada sare ee Vantaa.
Ardayda dugsiyada sare iyo kuwa machadka Varia ee fasallada labaad iyo saddexaad, waxaa ay bilaabayaan xilli-dugsiyeedka dayrta toddobaadka soo socda Arbaco 11.8.2021. Ardayda cusub ee machadka Varia waxaa ay waxbarashadooda bilaabayaan maanta 4.8.
Iskuullada waxbarashada ee degmada Vantaa waxaa loo hoggaansamayaa tilmaanbixinta dhanka ammaanka korona ee xilligaan shaqaynaaya (waxaa ka mid ah. afshareerka iyo qalabka kale ee cudurka la isaga ilaalinaayo, gacmo dhiqista, kala fogaanshaha).
Iskuulka ayaa siinaaya afshareerka ardayda ka tirsan kooxda waajibnimada waxbarashadooda la ballaariyay (ardayda sannadka koowaad ee waxbarashada). Ardayda kale iyaga ayaa soo iibsanaaya afshareerka. Haddii aad afshareerka guriga ku soo ilowdo, waxaa afshareerka ku siinaaya iskuulkaaga. Sidoo kale xittaa qofka qaatay tallaalka xoojinta ama tallaalka 2.aad, waa in ay iskuulka dhexdiisa ku qaataan afshareerka. Marka qofku uu joogo waxbarashada goobta shaqada, waa in loo hoggaansamaa tilmaanbixinta korona.
Waqtiga ballan qabsashada tallaalka feyruska korona waxaa loo furay dadka ku nool caasimadda iyo hareeraheeda ee jira 16 sano jirka iyo kuwa ka waawayn. Dadka ku nool caasimadda iyo hareeraheeda, waxaa ay caasimadda iyo hareeraheeda ka ballansan karaan bogga internetka ee https://www.koronarokotusaika.fi/
Waxaan ku dhiirriggelinaynaa dhammaan ardayda in ay qaataan tallaalka korona, si sida ugu dhakhsaha badan wax looga qabto xaaladda cudurka ee soo xumaatay. Markaa waxaan heleynaa suurtaggalnimada aadka u wanaagsan ee ah, in waxbarashada xilli-dugsiyeedka dayrta lagu qaato goobta waxbarashada.
Ku soo dhawaada waxbarashada!
Madaxa adeeg-waaxeedka waxbarashada heerka labaad